Oscar oo ugu danbeyntii rikoor cusub kula biiraya kooxda Shiinaha ka dhisan | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Oscar oo ugu danbeyntii rikoor cusub kula biiraya kooxda Shiinaha ka dhisan
Oscar oo ugu danbeyntii rikoor cusub kula biiraya kooxda Shiinaha ka dhisan
Shangai – Chelsea ayaa xaqiiqay inuu dhaqan-galay heshiiska uu adduun lacageedka gaaraya 52 malyuun Gini uga dhaqaaqay laacibka reer Brazil ee Oscar – isaga oo ku biiriya kooxda ka dhisan horyaalka dalka Shiinaha ee Shanghai SIPG.
Wuxuu noqon doonaa saxiixii ugu qaalisanaa ee kooxda reer Shiinaha ahi ku qaadato ciyaaryahan caalami ah. Oscar ayaase ku biiraya tababarihii hore ee Chelsea Andre Villas-Boas oo kol hore ku sugnaa Shiinaha.
Oscar ayaan safan marka laga reebo 11 kulan taniyo bilowga xagaagan – isaga oo aan la bilaabin kulanka furitaankooda kaas oo Liverpool ay ku suldaartay 2-1.
Kadib dhaqan-galka heshiiskiisa cusub, Oscar ayaa bartiisa ku qoray: “Waxaan u mahad-naqayaa maamulka. ciyaartoyda iyo dhamaan taageerayaasha kooxda Chelsea kuwaas oo naadigan ka dhigay mid fac weyn: waxaan idin lasoo qaatay waqtiyo badan iyo guulo la taaban karo.”
Madaxda Chelsea ayaa iyaguna ku qoray bartooda: “Waxaan Oscar kaga mahad-celinaynaa wax-qabadkiisa quruxda badnaa: waxaana aynu u rajeynaynaa mustaqbal fiican.”
Laacibka reer Brazil ayaa rikoor cusub oo saxiix ah ugu biiraya kooxda Shiinaha ka dhisan – isaga oo sidoo kale noqonaya laacibka ugu mushaharka badan naadigaas.
Previous: Moyes oo qiray in Bale uu ahaa bartilmaantiisa koobaad xilligiisa United-ka.
Next: Klopp: Laacibiinta lacag-raacatada ahi malahan anshax iyo xeer.